विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह : किसान भन्छन्– विषादीविना व्यावसायिक कृषि सम्भव छैन – Health Post Nepal
२०७६ पुष २४ गते ११:०९
चितवन रत्ननगर–१ जिरौनाका विष्णुहरि पन्त जिल्लाकै सफल केराव्यवसायी हुन् । ५ वर्ष इजरायल बसेर कृषिकर्मको अनुभव हासिल गरेका उनले स्वदेश फर्किएपछि दुई बिघा जमिनबाट केरा व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । अहिले उनको व्यावसायिक केराखेती ४५ बिघामा फैलिएको छ । तर, केरा उत्पादनका लागि उनी विषादीमा निर्भर हुँदै आएका छन् ।
भरतपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकारहरूमाझ पन्तले विषादी नहालीकन केरा उत्पादन गर्न कठिन रहेको बताए । ‘केरामा अत्यधिक झरनाशक विषादीको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘विदाषीको प्रयोगविना हामीले उत्पादन नै गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ विकसित देशमा पनि व्यावसायिक कृषिमा विषादी प्रयोग उल्लेख्य हुने गरेको अनुभव उनी सुनाउँछन् । ‘म इजरायल बसेर काम गर्दा त्यहाँको प्रविधिमा पनि कृषि व्यवसायमा विषादी प्रयोग गर्नु नै पर्थ्यो,’ उनले भने ।
कृषि क्षेत्रमा विषादीको अत्यधिक प्रयोग नियन्त्रणका लागि चेतना फैलाउने उद्देश्यले बुधबारदेखि विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह सुरु भएको छ । ‘घातक विषादीको प्रयोग हटाऔँ, जैविक विविधताको संरक्षण गरौँ’ नाराका साथ २९ पुससम्म विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह–२०७६ सुरु भएको हो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश ३ को बाली संरक्षण प्रयोगशाला ललितपुर र कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको संयुक्त आयोजनामा जिल्लामा प्रभातफेरीसहित सभाको आयोजना गरी विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताहको शुभारम्भ गरिएको छ । सप्ताहको उद्घाटन गर्दै प्रदेश ३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावादोर्जे लामाले जनतालाई निरोगी बनाउने अभियानलाई किसानको तहसम्म पुर्याउनुपर्ने बताए । एक साता मात्र यस्तो अभियान सञ्चालन गरेर नपुग्ने भन्दै उनले विषादीमुक्त बनाउन दैनिक रूपमा लाग्नुपर्ने धारणा राखे । मन्त्री लामाले विषादीको विकल्पमा अग्र्यानिक उत्पादनमा जोड दिन आग्रहसमेत गरे ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापनका अनुसार सरकारले २४ प्रकारका घातक विषादीमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । विश्वमा विषादीयुक्त खानेकुराका कारण वार्षिक ३ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरेको तथ्यांक छ । खेतबारीमा प्रयोग हुने विषादीले शत्रु जीव मात्रै नभई मित्रु जीवसमेत नाश भई ‘इको सिस्टम’ (पारिस्थितिक प्रणाली) नै प्रभावित हुने गरेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापनका निमित्तप्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईंले जानकारी दिए ।
हुमागाईंका अनुसार नेपालमा सन् १९५२ मा पहिलोपटक मलेरिया नियन्त्रणका लागि भित्र्याइएको विषादीको प्रयोग अत्यधिक छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ३५ मेट्रिकटन विषादी आयात भएको थियो । त्यसमा कीटनाशक २ सय २६, रोगनाशक २ सय ६७, झारनाशक १ सय ४२ र अन्य १४ मेट्रिकटन छन् । नेपालमा तरकारीबालीमा प्रतिहेक्टर १६ सय ५ ग्राम विषादी प्रयोग भइरहेको हुमागाईंले जानकारी दिए । नेपालमा जीवनाशक विषादी ऐन २०७६ लागू छ । यसले केही हदसम्म विषादीको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न सक्ने विश्वास हुमागाईंको छ ।
नेपालमा सन् २०१३ देखि विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह मनाउन सुरु गरिएको हो । तर पनि नेपालमा वार्षिक विषादी आयातका लागि मात्र ८४ करोड रूपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालमा तरकारीबालीमा केही हदसम्म कम विषादी प्रयोग गरिएको भनिए पनि यकिन तथ्यांक भने केन्द्रसँग छैन । तरकारीबालीमा करिब ८५ प्रतिशत विषादी प्रयोग हुने गरेको छ । मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विषादीको प्रयोग बढेसँगै विभिन्न प्राणघातक रोगसमेत फैलने गरेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्की कार्की बताउँछन् ।
तरकारीमा विषादी आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग हुँदै आएको छ । क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला तथा कलेजोसम्बन्धी समस्या, मधुमेह, नपुंसकता, बाँझोपन, मस्तिष्कमा असर, स्मरणशक्तिमा ह्रास, डिप्रेसनलगायत नसर्ने रोगको मुख्य कारण विषादी सेवन रहेको भरतपुर बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका डा. गंगा सापकाटा बताउँछन् । विषादीकै कारण मस्तिष्क, मुटु र क्यान्सररोगका बिरामी बढ्दै गएको उनको ठम्याइ छ ।
‘मुलुकमा उत्पादितमध्ये केही स्थानका तरकारीमा मात्र विषादीको मात्राबारे अध्ययन गरिएको छ । तर, विषादीको अवशेषले नेपालीको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव गरिरहेको छ वा गर्न सक्छ भन्नेबारे कुनै अध्ययन नै छैन,’ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को प्रतिवेदन उधृत गर्दै डा. सापकोटाले भने, ‘विषादी मानव स्वास्थका लागि प्रतिकूल हुनुका साथै यसले दीर्घकालीन प्रभाव पारेको छ ।’
बाली जोगाउनका लागि प्रयोग गरिने औषधिले छाला, र श्वासप्रश्वासमा समेत असर गर्ने उनले बताए । स्तनपान गराउने आमाले बढी विषादी हालेका खानेकुरा खाँदा बालकलाई समेत शारीरिक तथा मानसिक असर पुग्ने उनले जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विषादी न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतनामूलक नाटकसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रमको सुरुवातमा नारायणगढको लायन्सचोकदेखि क्षेत्रपुर हुँदै महानगर तरकारी बजारसम्म विषादी प्रयोग न्यूनीकरण गर्न सन्देशमूलक प्लेकार्डसहित र्याली निकालिएको थियो ।